विमानस्थलबाट ७ करोड भन्दा बढी जाली भारु बरामद ! युनुस अन्सारी फेरी पनि समातिए….::Leading Nepal News
विमानस्थलबाट ७ करोड भन्दा बढी जाली भारु बरामद ! युनुस अन्सारी फेरी पनि समातिए….
जेठ १०, काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ४ करोड ७६ लाख ९४ हजार नक्कली भारतीय नोटसहित नेपाली र पाकिस्तानी नागरिक पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा यसअघि पनि जाली भारु नोट कारोबारकाण्डमा जेल परेका युनुस अन्सारी समेत रहेका छन् । विमानस्थलका सुरक्षा प्रमुख सन्दीप भण्डारीका अनुसार सात करोड ७६ लाख ९४ हजार नक्कली भारुसहित शुक्रबार दिउँसो छजना पक्राउ परेका हुन्।
पक्राउ पर्नेमा कतारको दोहाबाट रकम लिएर आएका तीन पाकिस्तानी नागरिक र पैसा रिसिभ गर्न विमानस्थल पुगेका तीन नेपाली रहेका छन्। पाकिस्तानी नागरिक नासिर उद्धिन, नादिया अनवर, महमद अक्तरलाई विमानस्थल प्रहरी र भन्सारले पक्राउ गरेको हो। रकम रिसिभ गर्न विमानस्थल पुगेका युनुस अन्सारी, सोयर खान र सुजन रानाभाटलाई नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोले पक्राउ गरेको हो। कतार एयरवेजको विमानमार्फत नेपाल आएका तीन जना पाकिस्तानी नागरिकले सुटकेसमा ल्याएको सो जाली रकम विमानस्थलमा चेकजाँचका क्रममा शुक्रबार दिउँसो बरामद भएको थियो ।
युनुस अन्सारी अहिले मात्रै पक्राउ परेका होइनन्, उनी विगतमा पनि नक्कली नोट कारोबारमा दोषी देखिएर जेल सजाय भोगिसकेका व्यक्ति हुन् । युनुसलाई ‘कुख्यात’ नक्कली नोट कारोबारीको रुपमा चिनिन्छ । यसअघि उनलाई प्रहरीको विशेष व्यूरोले २०६५ पुस १८ गते ललितपुरको नख्खुस्थित उनकै घरबाट पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेको २ वर्षपछि जेलमा रहेका बेला २०६७ फागुन २६ गते सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारको गेटमै उनीमाथि गोली प्रहार गरिएको थियो । ३ वर्ष ९ महिना कारागार भुक्तान गरेका अन्सारी दोस्रो पटक २०६६ पुस ७ गते थापाथलीस्थित ब्लू स्टार कम्प्लेक्सको कोठा नम्बर ६११ बाट २५ लाख ४४ हजार ५ सय नक्कली भारतीय रुपैयाँ र ३ किलो ७ सय ग्राम खैरो हेरोइनसहित पक्राउ परेका थिए । उनलाई जाली नोट कारोबार र अवैध लागूऔषध कारोबारको अभियोगमा फेरि कारागार चलान गरिएको थियो ।
उनी नक्कली नोट कारोबारमा पटक–पटक पक्राउ गर्दै जेल पर्दै फेरि पुरानै कारोबारमा फर्किने गरेको देखिएको छ । उनी नक्कली नोटसहित पक्राउ परेको यो तेस्रो पटक हो । अभियुक्त युनुस अन्सारी जेल सजाय भुक्तान गरी १ वर्षअघि २०७४ चैत २ गते छुटेका थिए । नोटबन्दीमार्फत भारतले नयाँ नोट लागू गरेपछि नक्कली भारु नेपालमा बरामद भएको यो पहिलो घटना हो । सो नोट बंगलादेशबाट आएको थियो ।